एक्सेलमा गुगल अर्थ निर्देशांक हेर्नुहोस् - र तिनीहरूलाई यूटीएम - जिओफुमाडासमा रूपान्तरण गर्नुहोस्
घर/डाउनलोडहरू/एक्सेलमा गुगल अर्थ निर्देशांक हेर्नुहोस् - र तिनीहरूलाई यूटीएममा रूपान्तरण गर्नुहोस्
डाउनलोडहरूगुगल अर्थ / नक्सा
मसँग गुगल अर्थमा डाटा छ, र म एक्सेलमा निर्देशांकहरू देख्न चाहन्छु। तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, यो vert शिरोबिन्दु भएको भूमि र चार शिरोबिन्दु भएको घर हो।
गुगल अर्थ डेटा बचत गर्नुहोस्।
यो डेटा डाउनलोड गर्न, "मेरो ठाउँहरू" मा दायाँ क्लिक गर्नुहोस्, र "स्थान सुरक्षित गर्नुहोस्..." चयन गर्नुहोस्।
फाईल हुनुको लागी रेखाहरू, बिन्दुहरू र गुणहरू जुन मैले आइकनमा परिमार्जित गरेको छु, फाइल सरल किलोमिटरको रूपमा तर किलोमिटरको रूपमा बचत हुनेछैन।
KMZ फाईल के हो?
एक किमीजेड संकुचित किमीएल फाइलहरूको एक सेट हो। त्यसो भए, यसलाई अनजिप गर्न सब भन्दा सजिलो तरीका भनेको हामी एक .zip वा .rar फाईलको साथ गर्छौं।
1. फाइल एक्सप्लोररको "दृश्य" ट्याबबाट फाइल एक्सटेन्सन हेर्ने विकल्प सक्रिय गरिएको छ।
२.kmz बाट .zip मा विस्तार परिवर्तन गर्नुहोस्। यो गर्नका लागि फाईलमा सफ्ट क्लिक बनाइन्छ, र पोइन्ट परिमार्जन पछि डाटा। हामी देखा पर्ने सन्देशलाई स्वीकार गर्दछौं, जसले हामीलाई भन्छ कि हामी फाईल विस्तार परिवर्तन गर्दैछौं र यसले यसलाई प्रयोगहीन बनाउँदछ।
3. फाइल असम्पीडित छ। दायाँ माउस बटन, र "Extract to..." चयन गर्नुहोस्। हाम्रो अवस्थामा, फाइललाई "जियोफ्युम्ड क्लासरूम ल्याण्ड" भनिन्छ।
केएमएल फाइल के हो?
KML एक स्वरूप हो जुन गुगल अर्थ द्वारा लोकप्रिय छ, जो कि किहोल कम्पनी भन्दा पहिले भएको थियो, त्यसैले नाम (किहोल मार्कअप भाषा), त्यसकारण, यो एक फाईल हो XML संरचना (एक्सटेन्सिबल मार्कअप भाषा)। त्यसोभए, XML फाईल भएर यो एक्सेलबाट हेर्न सक्षम हुनुपर्दछ:
र भोईला, अब हामीसँग गुगल अर्थ निर्देशांक फाईल छ, एक एक्सेल तालिकामा। प row्क्ति २ from बाट सुरू गरेर, स्तम्भ X मा भेरिको नामहरू देखा पर्दछ, र स्तम्भ एएचमा अक्षांश / देशान्तर निर्देशांक। मैले केहि स्तम्भहरू लुकाएको छु, ताकि तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ कि प r्क्ति 29० र you१ मा तपाईंले दुईवटा बहुभुजहरू देख्न सक्नुहुन्छ जुन मैले कोरिएको थियो र उनीहरूको निर्देशांकको श्रृंखलामा।
त्यसोभए, X स्तम्भहरू र AH हरूको प्रतिलिपि बनाउँदा तपाईसँग तपाईको गुगल अर्थ बिन्दुका वस्तुहरू र समन्वयहरू छन्।
हामी आशा गर्दछौं कि माथिको एक किलोमिटर डेटामा Google धरती डेटा कसरी बचत गर्ने भनेर बुझ्न मद्दत गर्दछ, साथै यो कि कसरि kml फाइलको किन्टरमा kmz फाइललाई बुझ्न सकिन्छ, अन्ततः कसरी Google Earth लाई एक्सेल प्रयोग गरेर समन्वय गर्न हेर्न सक्नुहुन्छ।
गुगल अर्थबाट UTM मा डेटा परिवर्तन गर्नुहोस्।
Google Earth बाट AutoCAD लाई डेटा पठाउनुहोस्।
तपाईसँग टेम्प्लेट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ पेपाल वा क्रेडिट कार्ड। भुक्तानी गर्दा, तपाईं डाउनलोड लिंकको साथ ईमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ। टेम्प्लेट खरीद गर्दा तपाईंलाई ईमेल समर्थनको हकदार हुन्छ, यदि तपाईंसँग टेम्पलेटको साथमा समस्या छ भने।
यो शर्म हो, अधिक वा Google धरतीले बहुभुजहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ जुन सटीक एसिटिभ विशेषताहरूसँग। É melhor fazê-lo em GIS कार्यक्रम को बाहिर र यसलाई पठाउनुहोस् या Google धरती।
ग्लिया जोसिना भन्छिन्:
म बहुभुज Google धरती कसरी जोड्न सक्छु?
पहिलो बिन्दु राख्नु महत्त्वपूर्ण छ र क्षेत्रलाई सीमा नाघ्न तिनीहरूलाई सामान्य वा बहुभुज थप गर्नुहोस्। अधिक वा यो हुन्छ जब फ्युको वा जूमले कामको क्षेत्र दिन्छ, वा पानो नाओ सर्ब्रुउओ एओ वा बहुभुज, डेक्सोन्डको बीचमा त्रुटिको ठूलो दूरी डिगुगो वा ई पान्टो।
हे, म एक बहुभुज Google धरती को जोडने को आवश्यकता छैन (यो एक्सेल देखि, हुन सक्छ)
मलाई आशा छ कि म समायोजन र muito obrigada!
hiep nguyenba भन्छिन्:
फाइल को रूप मा कुनै पनि छ कि यो छ, या यदि हामी यो फाइल को रूप मा नहीं मिलयो छ, इमेल nguyenbahiep775@gmail.com। Rất cảm ơn anh।
यस लिङ्कमा विभिन्न एक्सेल पानाहरू छन् जुन तपाईले ट्राकोड समन्वय गर्न सक्नुहुनेछ
नमस्ते geofumadas, Google धरती को उपयोग को लागि उत्कृष्ट सुझाव, यसले मलाई मेरो काम मा धेरै मदद गर्दछ।
एउटा समर्थन, जहाँ म UTM मा भौगोलिक कगारको सूची परिवर्तन गर्न FORM डाउनलोड गर्न सक्दछु, यो UTM मा, मलाई यो चाहिन्छ।
म तपाईंको टिप्पणीको लागि पर्ख्छु